Tyelela i-USA: Iimfuno ezichanekileyo zokungena e-United States
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba zase-USA ezaphulayo » Tyelela i-USA: Iimfuno ezichanekileyo zokungena e-United States
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Ukuhamba ngeshishini • Iindaba zikaRhulumente • Iindaba zeMpilo • iindaba • abantu • Ukwakha kwakhona • Xanduva • Safety • Tourism • uthutho • Iindaba zeWired Travel • komzila Ngoku • Iindaba zase-USA ezaphulayo
Tyelela i-USA: Iimfuno ezichanekileyo zokungena e-United States.
Bobabini abemi base-US kunye nabemi bamazwe angaphandle abagonywe ngokupheleleyo kufuneka bahambe kunye nobungqina besimo sabo sokugonywa ukuze babonelele kwinkampani yabo yeenqwelomoya ngaphambi kokuba bahambe baye eUnited States.
Ulawulo lweBiden lubhengeze umgaqo-nkqubo omtsha wokuhamba ngomoya wamazwe ngamazwe ongqongqo, ongaguqukiyo kwihlabathi liphela, kwaye ukhokelwa yimpilo yoluntu.
Ukuqala nge-8 kaNovemba, abahambi ngeenqwelomoya belizwe langaphandle ukuya eUnited States kuya kufuneka ukuba bagonywe ngokupheleleyo kwaye banike ubungqina bemeko yokugonywa ngaphambi kokukhwela inqwelomoya ukuba baye eUnited States,
Abahambi bomoya abagonywe ngokupheleleyo baya kuqhubeka nokufunwa ukuba babonise amaxwebhu ovavanyo lwentsholongwane olungenayo intsholongwane ngaphambi kokuhamba ukusuka kwisampulu ethathwe kwiintsuku ezintathu zokuhamba ukuya eUnited States ngaphambi kokukhwela.
Ukusukela nge-8 kaNovemba eunited States itshintsha iimfuno zolonwabo kunye nabahambi bezoshishino ukuba bangene e-US.
Iunited States KwiSebe likaRhulumente ikhuphe uGonyo olutsha lwe-COVID-19 kunye noVavanyo lwezikhokelo zokuHamba zaMazwe ngaMazwe namhlanje.
Ukuqala ngoNovemba 8, abahambi ngeenqwelomoya zelizwe langaphandle ukuya kwi eunited States kuya kufuneka ukuba ugonywe ngokupheleleyo kwaye unikeze ubungqina bemo yogonyo phambi kokukhwela inqwelomoya ukubhabha ukuya eUnited States, ngaphandle kwemida kuphela.
The CDC ugqibe ukuba ngeenjongo zokungena kwi eunited States, izitofu zokugonya ezamkelweyo ziya kubandakanya ezo zivunyiweyo ze-FDA okanye ezigunyazisiweyo, kunye nezitofu ezinoluhlu losetyenziso olungxamisekileyo (EUL) olusuka kuMbutho wezeMpilo weHlabathi (i-WHO). Jonga cdc.gov ngeenkcukacha ezithe vetshe.
Abahambi bomoya abagonywe ngokupheleleyo baya kuqhubeka nokufunwa ukuba babonise amaxwebhu ovavanyo lwentsholongwane olungenayo intsholongwane ngaphambi kokuhamba ukusuka kwisampulu ethathwe kwiintsuku ezintathu zokuhamba ukuya eUnited States ngaphambi kokukhwela. Oko kubandakanya bonke abahambi - abemi base-US, abahlali abasisigxina abasemthethweni (LPRs), kunye nabemi bangaphandle.
Ukomeleza ngakumbi ukhuseleko, abahambi abangagonywanga - nokuba ngabe ngabemi base-US, ii-LPRs, okanye inani elincinane labemi bangaphandle abangagonywanga - ngoku kuya kufuneka babonise amaxwebhu ovavanyo lwentsholongwane engeyiyo kwisampulu ethathwe kwisithuba sosuku olunye lokuya e-United States.
Obo bungqina bogonyo kufuneka lube liphepha okanye irekhodi yedijithali ekhutshwe ngumthombo osemthethweni kwaye kufuneka ibandakanye igama lomhambi kunye nomhla wokuzalwa, kunye nemveliso yesitofu kunye nomhla (ii) zolawulo lwazo zonke iidosi ezifunyenwe ngumhambi.
Kubemi bamazwe angaphandle, ubungqina bokugonywa buya kufuneka - ngaphandle kokukhawulelwa kakhulu - ngaphambi kokuya e-United States.
Ngelixa ubungqina bogonyo bungafuneki kubemi base-US kunye nee-LPRs, abemi base-US abagonywe ngokupheleleyo kunye nee-LPRs (kunye nabaxhomekeke kubo) baya kuqhubeka bekwazi ukubonisa amaxwebhu ovavanyo lwentsholongwane engalunganga ukusuka kwisampulu ethathiweyo ukuya kuthi ga kwiintsuku ezintathu ngaphambi kokuya eUnited States. . Mabaveze ubungqina bogonyo ukuze bafaneleke ukufumana ifestile yovavanyo lweentsuku ezi-3. Abemi base-US kunye nee-LPRs abangakwaziyo ukubonisa ukuba bagonywe ngokupheleleyo kuya kufuneka babonise amaxwebhu ovavanyo olungenayo intsholongwane egazini oluthathwe kungadlulanga usuku olunye phambi kokuhamba.
Ukongeza ekuqinisekiseni ubungqina beziphumo zovavanyo ezingalunganga zangaphambi kokuhamba-abazenzileyo ukusukela ngoJanuwari ka-2021 - iinkampani zeenqwelo moya ngoku nazo ziyakuqinisekisa imeko yogonyo.
Abakhweli kuya kufuneka babonise isimo sabo sokugonywa, mhlawumbi ngerekhodi yephepha, ifoto yerekhodi yabo yephepha, okanye i-app yedijithali.
Iinqwelomoya ziya kufuna:
Tshatisa igama kunye nomhla wokuzalwa ukuqinisekisa ukuba umkhweli ikwangulo mntu ubonakaliswe kubungqina bogonyo;
Qinisekisa ukuba ingxelo ikhutshwe ngumthombo osemthethweni (umzekelo, i-arhente yezempilo yoluntu, i-arhente karhulumente) kwilizwe apho iye yanikezelwa khona isitofu sokugonya;
Ukuphonononga ulwazi olubalulekileyo lokumisela ukuba umkhweli uyahlangabezana nenkcazo ye-CDC yokugonywa ngokupheleleyo njengemveliso yesitofu, inani leedosi zesitofu sokugonya ezifunyenweyo, umhla (imihla) yolawulo, indawo (umz., ikliniki yogonyo, indawo yokhathalelo lwempilo) yogonyo.
Abantwana abangaphantsi kweminyaka eyi-18 bakhululwe kwimfuno yokugonywa kubahambi belizwe langaphandle, ngenxa yokungafaneli kwabanye abantwana abancinci ukuba bagonywe, kunye nokuguquguquka kwehlabathi ekufikeleleni kugonyo lwabantwana abadala abafanele ukugonywa.
Abahambi kufuneka babonise amaxwebhu eziphumo zovavanyo olunentsholongwane ye-COVID-19 okanye amaxwebhu okubuyisela kwi-COVID-19 kwiintsuku ezingama-90 ezidlulileyo phambi kokuba bakhwele inqwelomoya ukuya eUnited States (okanye phambi kokukhwela inqwelomoya yokuqala kuthotho lonxibelelwano olubhukishwe ngokufanayo. uhambo oluya eUnited States).
Zombini iimvavanyo ze-nucleic acid amplification (NAATs), ezifana novavanyo lwe-PCR, kunye neemvavanyo ze-antigen zifanelekile.
Ukuzivavanya kungasetyenziselwa ukuba ihlangabezana neemfuno zomyalelo kubandakanywa ukuthengiswa kwexesha langempela yinkonzo ye-telehealth ehambelana nomenzi wovavanyo kwaye ivelisa umphumo wokuvavanya onokujongwa yi-airline ngaphambi kokukhwela.
Lo ngumgangatho ofanayo weemvavanyo ezifanelekileyo eziye zafaka isicelo kwimfuno yovavanyo lwangaphambi kokuhamba ukususela ngoJanuwari.
Uvavanyo kufuneka lwenziwe ngaphezu kweentsuku ezintathu zekhalenda phambi komhla wenqwelomoya yamazwe ngamazwe ukuya eUnited States.
Ke, ukuba umhambi uya e-United States ngentsimbi ye-10 PM nge-19 kaJanuwari, kuya kufuneka abonise iziphumo zovavanyo olubi kuvavanyo olwathathwa nangaliphi na ixesha emva kwe-12:01 AM nge-16 kaJanuwari.
Ngaphambili, bonke abahambi bekufuneka babonise iziphumo zovavanyo olubi kwiintsuku ezintathu zohambo oluya eUnited States.
Kwabo bemi base-US kunye nee-LPR ezinokubonisa ukuba zigonywe ngokupheleleyo, loo mfuneko ihlala ifana - kufuneka babonise amaxwebhu eziphumo zovavanyo olubi kwisampulu ethathiweyo kwiintsuku ezintathu zohambo.
Oko kuthetha ukuba bonke abemi base-US abagonywe ngokupheleleyo kunye nee-LPR ezihamba e-United States kufuneka zilungele ukubonisa amaxwebhu emeko yabo yokugonywa ecaleni kweziphumo zabo zovavanyo olubi.
Abo bemi base-US kunye nee-LPRs abangakwaziyo ukubonisa ubungqina bogonyo olupheleleyo ngoku kuya kufuneka babonise amaxwebhu ovavanyo olubi kwisampulu ethathwe kwisithuba sosuku olunye lokuhamba.
Eyona ndlela ilula yokuphepha ukuhlangabezana nale mfuneko inzima kukuba abahambi bayogonywa.
Sikholelwa ukuba uninzi lwabakhenkethi bamazwe aphesheya bazakuba sele begonywe ngokupheleleyo kwaye abo bangekagonywa kwaye befanelekile kufuneka bagonywe phambi kokuba bahambe.
Uvavanyo oluthe kratya lwe-proctored lufumaneka ngokubanzi e-United States, ngoko ke abemi base-US abahamba phesheya banokuza nekhithi yovavanyo lwe-proctored xa besuka e-US abanokuthi bayithathe ngaphambi kokuba babuyele ekhaya. Kwaye siqinisekile ukuba kuya kubakho unikezelo olwaneleyo kwihlabathi jikelele.
Nangona kunjalo, kukho kwakhona inkqubo yokukhutshwa kwimfuno yovavanyo lwangaphambi kokuhamba xa uvavanyo olufanelekileyo lungekho.